disorder qabsiga dhacdaa marka dadka ha ka soo kabsado isbedel weyn ama waayo-aragnimo u adag. Dhakhaatiirta inta badan ka heli in qaxootiga iyo muhaajiriinta qabtid jirro ah la qabsashada.
“Perturbation” Waxaa loola jeedaa in ay jirto wax qalad ah. “Saxitaanka” Waxaa loola jeedaa isbedel xaaladda. disorder qabsiga waa marka way adag tahay in aad bedesho marka ay dhacdo waxay dhacdaa deadbeat. Qaar ka mid ah dhacdo walaac guuro wadan cusub, ama is guursan, ama laga badiyo, ama aad waydid shaqadaada, ama marka qof dhinto.
Calaamadaha cudurka sixitaanka
Calaamaduhu waa dareen iyo dhaqamada aad qabtid jirro awgeed. Waxaad heli kartaa calaamadaha cudurka sixitaanka gudahood 3 Months dhacdada galayo in dhacdaa. Laakiin calaamadaha cudurka sixitaanka sida caadiga ah ma ka badan 6 Months. Qaar ka mid ah calaamadaha cudurka sixitaanka yihiin:
Dareen ah walwal
Dareen aad sida ma aan samayn karo hawlaha caadiga ah
Jooji hawlaha aad jeceshahay inaad sameysid
Ma doonayo in aan cuno
Dhibaato shaqada ama dugsiga
Haddii aad dhacdo walaac iyo aad haysato qaar ka mid ah calaamadahan, waxa laga yaabaa inaad la il daran cudurka sixitaanka. Tusaale ahaan, haddii aad kaliya u dhaqaaqay Maraykanka waddan kale, waxaa laga yaabaa in aad dareento murugo iyo walwal. Laakiin haddii aad dareentid murugo iyo walwal sidaas daraaddeed ma ay aad samayn karto hawlaha maalin kasta, waxaad kala hadli kartaa dhakhtarkaaga oo ku saabsan sidii aad u heli caawimo. Haddii aad weli dareemaan walaac murugo oo qoto dheer ka badan 6 Months, tani ma aha wax caadi ah. Waa in aad heshaa habab ay is ogow of caafimaadka maskaxda.
Aqoonta qaxootiga waa nolosha weligeed ah